Basic Photoshop - PAÑÑĀ Online School
Oak's English Academy
Diploma & Fellowship
Daw Khin Thant Sin
•	Daw Khin Thant Sin receive her B.C.Tech Degree from University of Computer Studies Yangon. She isaformer computer software programmer since 2014. She isaFellowship of Japan-Myanmar-Vietnam Asia ... More
Faculties : Daw Khin Thant Sin|;|20
Photoshop သင်ခန်းစာမှာတော့ Adobe Photoshop Cc ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာရရှိနိုင်မှာကတော့
•	Adobe Photoshop Cc 2017 ရဲ့ User Interface မှစတင်ကာ အသုံးအနှုန်းများမှတ်သားခြင်း
•	ဖိုင်များအား တစ်ပြိုင်နက်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊မြင်ကွင်းပုံစံများပြောင်းလဲ ချိန်ညှိခြင်း
•	Photoshop တွင်သုံးနိုင်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားများနှင့် အရောင်ပုံစံကွဲများ
•	ဓါတ်ပုံ size များပြောင်းလဲခြင်း နှင့် အသုံးများသော Tools များ
•	Layer များအလုပ်လုပ်ပုံ၊ selection ပြုလုပ်နည်းအမျိုးမျိုး
•	စာလုံးထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပုံများ၊ ရိုးရှင်းသော Logo ၊ လိပ်စာကတ်ပြုလုပ်နည်းများ
•	မိမိအသုံးလိုသော file ပုံစံအမျိူးအစားဖြင့် ဖိုင်ထုတ်ခြင်း